मित्रहाङ्को दाम्लोले जन्माएको प्रश्न::kamananews
“Small thing makes big difference”, हुन त प्रकृतिमा जति कुरा अस्तित्वमा छन त्यी सबै कुरा अाफैमा सानो वा ठूलो भन्ने कुरा हुदैन। सबैको अा -अाफ्नो ठाउँमा अा-अाफ्नै महत्व हुन्छ नै। यस प्रकृतिमा भएका हरेक कुरा निरपेक्ष हुन्न तिनीहरुलाइ सापेक्षमा बुझ्नु र त्यहि अनुसार ब्यबहार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनिन्छ। कुनै बस्तुको बारेमा, कसैको बिचारको बारेमा, परिवारमा भएका नियमित कृयाकलापमा, सामाजिक जीवनको गतिबिधिको बारेमा अाफुलाइ केहि अनुभव भए बेला देखि स्वत स्फुर्त रुपमा र त्यसलाइ चेतनाको तहमा स्वीकार गरेको उमेर देखि सामाजिक जीवनको बिभिन्न कुरितीहरुमा मैले जति सक्छु त्यति गर्नु पर्छ भन्ने सोचेर राजनीति तिर अाकर्षित हुदै अाफु जहाँ जुन भुमिकामा रहे तदअनुकुलको भुमिका निर्वाह गर्दै अाएको छु।
अाइतबारको दिन, म रहेको देश दक्षिणकोरियामा एउटा प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाको रजत जयन्ति मनाउने कार्यक्रम थियो। म पनि स्वभाविक रुपमा उक्त कार्यक्रममा सहभागि हुन तयारि गर्दै थिए, बिहानको समय। त्यसैक्रममा समाचारहरु के कस्तो छ भनेर हेर्दै थिए नजर पुग्यो ‘पाँच बर्षिय बालक दुई बर्ष देखि दाम्लोमा ‘। समाचारमा फोटो पनि थियो। फोटो राम्रोसंग हेरे, म अत्यन्तै संबेनशिल भए र अाँखा रसाएर अाए। हुन त त्यो परिवारको लागि र स्वयम त्यी बालकको लागि त्यो अत्यन्त भयङ्कर ठुलो पिडाको बिषय हो। यो बिशाल दुँनियामा यस्ता अनगन्ति घटना परि घटना र परिस्थितिहरु म एउटा समान्य ब्यक्तिको लागि ब्यक्तिगत रुपमा दुखत भए पनि सानै परिस्थिति हो। तर यस कुराले मलाइ भित्रै सम्म छोयो र म उक्त रजत जयन्ति कार्यक्रममा नजाने निर्णयमा पुगे। हुन त कोरियामा मनाउदै गरेको रजत जयन्ति कार्यक्रम र फिदिम पाँचथर मिक्लाजुङको पाँच बर्षिय बालक मित्रहाङको पिडासंग कुनै अन्तर संंबन्ध थिएन र छैन।
मित्रहाङ्को त्यो परिस्थिति अाउनुमा उनको अामालाइ समाजले अौला त उठाउला नै, अामा बराबर नै हकदार उनका बाबु पनि बैदेशिक रोजगारबाट फर्कन नसक्नुको कति जायज बाध्यता छ? यो पनि सवाल उठ्लानै। हाल हेरचाहरत हजुरबा हजुरअामाको हेरचाहँ गर्ने तरिका पनि घोत्लन बाध्य भइन्छ नै। यो एउटा परिस्थिति मैले समाचार पढेर मात्र थाहाँ पाएकि हु। त्यो समाजको, त्यो परिवारको, मित्रहाँङको अामाको, उनकोबाबुको र हजुरबा हजुरअामाहरुको अा-अाफ्नै बाध्यता बिबसताका कथाहरु होलान। त्यी कथाहरु नजानिकन परबाट मैले जज गर्नु उपयुक्त पनि नहोला सायद।
जहाँ सम्म मलाइ यो समाचारले छोएको बिषय छ त्यो भने अलि बेग्लै छ। संसार प्रगतिको उच्चतम बिन्दुमा पुग्दैछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रको बिकासको कुरा पनि हामीले सोच्ने क्षमता भन्दा माथि छ। बाल बालिको अधिकारको कुरा पनि जोड तोडले नै उठिराछ। हामी राजनीतिमा लागेकाहरु वा राजनीति सुधारेर मात्र सबै कुरा ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरु पनि देशमा होस वा प्रदेशमा अावश्यक्ता अनुरुप नै छौ। हामीले गरिरहेको राजनीतिले मित्रहाँङको परिवारमा किन छोएन? के राजनीति नेताहरुको दौराको फेरो वरपर मात्र हुदै गएको त होइन? के राजनीति बिसुद्ध समाजसेवा होइन र? यदि हो भने पाँचथरको त्यो वडामा नेपालका राजनीतिक दलको कुनै संगठन छैनन होला र?नयाँ सम्बिधानले मित्रहाँङको घरमै पठाएको सिंहदरवारको ढोका किन खुलेन होला? राजनीति जनतासंग किन जोडिएन होला? सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले मित्रहाँङसंग किन मित्रता गाँस्न सकेन होला?
यी र यस्ता यावत प्रश्नहरुले मलाइ गिज्याइरहेको छ। जाबो मित्रहाँङ्को २ पोयाको दाम्लोबाट मुक्ति दिन सकिएन भने हामीले बिश्वास गरेको राजनीतिको पनि के अर्थ भयो र? मानिसको जिवनशैलि, अाधारभूत चेतना, पारिवारिक दायित्व र सरकारि जिम्मेवारिमा सन्तुलन गर्न नसक्ने हो भने किन चाहियो दलका स्थानिय कमिटि? किन चाहियोघरदैलोमा सरकार। यावत प्रश्नहरु मनमा उठिरहँदा मैले निराशा सञ्चार गर्न खोजेकि भने अवश्य पनि होइन। यस घटनाले मलाइ मैले अाजको दिन सम्म बुझिरहेको राजनीति कोरा सैद्धान्तिक राजनीति मात्र रहेछ भन्ने बोध भएको कुरा संप्रेषण गर्न मात्र खोजेकी हुँ। सिद्धान्त रुपि त्यो अौजारलाइ जनताको जिवन स्तर उठाउनु म जहाँ छु जुन भुमिकामा छु त्यो भुगोलमामै अाफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याए सम्म प्रयोग गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने अठोटमा पुगेकी हुँ। म लगाएत मेरो पुस्ताले समजमा बिध्यमान छुवाछुत उचनीच, अन्धबिश्वास, बोक्सि, दाइजो लगाएत बिषयमाहरुमा मिलेर काम गरौ र भोलिको देशको भविश्य अाजको बालबालिकाहरुको अावश्यक हेरचाँह, उचित स्वास्थ्य सेवा, जीवनउपयोगि शिक्षाको सहज अवसर को स्थिति बनाउने बाटोमा लागौ भन्न चाहान्छु।
अन्त्यमा अोहोदामा पुगेर काम गर्छु भन्ने भन्दा पनि काम गर्ने तत्परता र अाफ्नो समाजको समस्याको पहिचान गर्ने क्षमता राखौ ताकि तपाइलाइ अोहोदाले माग गरोस।हाम्रो समाजमा गर्नु पर्ने अझै धेरै सुधारको कामहरु छन। समाज सुधारमा लाग्ने प्रेरणा हामी सबैमा निरन्तर जागृत भइरहोस भन्ने कामना गर्दछु।
(हाल दक्षिण कोरिया )
एलिसा सिं_दक्षिण काेरिया लोकतन्त्रमा लोकको अाम भावना अनुसार शासन गरिन्छ। जनभावनानिर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट गर्ने बैधानिक प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। प्रकट भएको जनभावना छानिएको जन प्रतिनीधिबाट प्रयोग गर्नको लागि पनि तदअनुकुलको कानुनि ब्यबस्था हुन्छ नै। कानुन र...
शंकर तिवारी भनिन्छ, अग्लो वृक्ष ढलेपछि त्यसको उँचाइ मापन सहज हुन्छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको निधनपश्चात् उनको उँचाइको चर्चा शुरू भएको छ । झापाको जमीनदार परिवारमा जन्मेका बास्तोलाले दार्जीलिङको कन्भेन्ट स्कूलबाट विद्यालय...